Obere oge opupu ihe ubi | Rayson
Obere oge mmiri
Rayson ejirila ebumnuche nke ịbụ ọkachamara na nke ọma. Anyị nwere ndị otu R & D siri ike nke na-akwado mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ, dị ka matraasi mmiri. Anyị na-anụ ezigbo nlebara anya na ọrụ ndị ahịa ya, anyị ewepụtala ụlọ ọrụ. Ndị ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ n'etiti na-anabata arịrịọ ndị ahịa na-anabata arịrịọ ndị ahịa ma nwee ike soro ọnọdụ ịtụ ya n'oge ọ bụla. Ebighị eto na-ebi ndụ anyị bụ inye ndị ahịa nwere ngwaahịa dị oke ọnụ na ngwaahịa dị elu, na iji mepụta ụkpụrụ maka ndị ahịa. Ọ ga-amasị anyị iso ndị ahịa na ụwa niile na-arụkọ ọrụ niile. Kpọtụrụ anyị ka anyị nweta nkọwa ndị ọzọ.
Ya na ndị ọrụ na-emepụta ihe dị iche iche na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ndị ọrụ Rayson nwere ike ịchebe onwe ha, zụlite, na nwalee ihe niile arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere matraasi nke anyị, kpọọ anyị ozugbo.
Dị ka ụlọ ọrụ draịva, Rayson na-eme ka ngwaahịa dị na nke anyị kwa oge, otu n'ime matraasi mmiri n'otu oge. Ọ bụ ngwaahịa kachasị ọhụrụ ma ga-eweta abamuru ndị ahịa.